Salah iyo De Bruyne Oo Hoggaaminaya Ciyaaryahannada U Sharraxan Xiddiga Ingiriiska Ee Sannadka
HomeAfricaWararka Somaliga AhSalah iyo De Bruyne Oo Hoggaaminaya Ciyaaryahannada U Sharraxan Xiddiga Ingiriiska Ee Sannadka
14/04/2018 Abdiwahab Ahmed
Xidhiidhka kubadda cagta waddanka Ingiriiska ayaa ku dhowaaqay murashaxiinta abaalmarinta xiddiga sannadka ee waddanka Ingiriiska, waxaana laacibiinta ugu badan ee tartamaysa ay ka socdaan kooxda kubadda cagta Manchester City.
Laacibiinta khadka dhexe ee David Silva, Kevin de Bruyne iyo Leroy Sane ayaa ku jira liiska, hase yeeshee weeraryahannada Liverpool iyo Tottenham ee Mohamed Salah iyo Harry Kane ayaa halka ugu sarraysa kaga calaamadsan liiska.
Goolhayaha Man United ee David de Gea ayaa kaalintiisa ka helay liiska, waxaase iyaguna ku jira Ryan Sessegnon oo difaaca uga ciyaara Fulham.
Lixdaas ciyaartoy ayaa mar kale lasii kala saari doonaa, waxaana laga soo xulan doonaa saddex ciyaartoy oo kala geli doona kaalmaha 1aad, 2aad iyo 3aad, waxaana loo badinayaa in laacibiinta Mohamed Salah, De Bruyne iyo Harry Kane inay iskugu soo hadhhi doonaan.
Dhinaca kale, lix ciyaartoy oo ku tartami doona abaalmarinta da’yarta ayaa la shaaciyey, waxaana hoggaaminaya 17 jirka Sessegon, waxaase boosaskooda helay Raheem Sterlin iyo goolhaye Ederson Moraes oo labaduba ka tirsan Man City.
Da’yarka Man United ee Marcos Rashford ayaa kaalintiisa ka helay.
Qaabka doorashada ciyaaryahannada da’da yar
Xiddigaha da’yarta loo xulayo, waxa ku xidhan shuruud ah inay da’doodu tahay ama ka hoosayso 23 jir.
Goorma ayaa lagu dhowaaqi doonaa xiddiga, yaase dooranaya:
Xiddiga ugu wanaagsan Ingiriiska waxa lagu dhowaaqi doonaa toddobaadka dambe 22 April, markaas oo xaflad weyn lagu qaban doono magaalada London, gaar ahaan hoolka weyn ee Grosvenor House.
Qaabka loo xulayo, ayaa ah inay u codayn doonaan xubnaha ku jira ururka qalinleyda ciyaaraha ee PFA, waxaana ciyaaryahanka ugu codka bata uu noqon doonaa laacibka sannadka.
Yaa haystay sannadkii hore:
Laacibka madow ee N’Golo Kante oo ka tirsan xulka qaranka France iyo kooxda Chelsea ayaa haysta abaalmarintan lagu tartamayo, waxaana abaalmarinta da’yarta haystay Dele Alli oo laba sannadood oo isku xigta la siiyey.